Xulka France oo hoggaanka u qatay Guruub A, kaddib guul soo laabasho ah oo ay ka gaareen Sweden, isreeb-reebka Koobka Adduunka… + SAWIRRO – Gool FM
Xulka France oo hoggaanka u qatay Guruub A, kaddib guul soo laabasho ah oo ay ka gaareen Sweden, isreeb-reebka Koobka Adduunka… + SAWIRRO
(Paris) 12 Nof 2016 – Xulka qaranka Faransiiska ayaa hoggaanka u qabtay Qeybta A ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 kaddib guul soo laabasho ah oo ay ka gaareen dhiggooda Sweden.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Stade de France ee waddanka France ayaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Laakiin markii dib la isugu soo laabtay ayaa waxaa goolka la horreeyey xulka martida ahaa ee Sweden, waxaana 54’daqiiqo laad xor ah (free kick) oo toos ah ugu shubay France xiddiga Emil Forsberg.
Xulka martida loo ahaa ee Faransiiska ayaa la yimid goolka barbaraha, waxaana madax ugu dhaliyey xiddiga ugu qaalisan dunida ee kooxda Man United Paul Pogba, kaddib markii uu madax ku dhaliyey bulusoon uu soo qaaday Dimitri Payet, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Caawiyaha goolka koowaad ee Faransiiska Dimitri Payet ayaana goolka guusha u dhaliyey xulkiisa 65’daqiiqo, sidaas ayaana looga adkaaday Sweden 2-1.
Guushan ayaa uga dhigan Faransiiska inay hoggaanka u qabteen guruubka A ee isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 iyagoo leh 10-dhibcood.
Xulka kaalinta labaad ku jira waa xulkan laga adkaaday ee Sweden kaasoo leh 7-dhibcood, waxaana guuldarradan ay uga dhigan tahay toodii saddexaad ee soo gaarta xulkan Sweden shantii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqdeen France.
TOOS u daawo: England vs Scotland - LIVE (Shaxda sugan)
DAAWO: Goolashii uu xulka Faransiisku uga adkaaday Sweden ee isreeb-reebka koobka Adduunka 2018